bilaash dukaanka tufaaxa cusub 2021 kulan ee ugu sareeya
3D! Ku raaxayso qosol, tartan iyo xanaaq! Garaac labyrinth-yada wakhtiyada leh ee sayid-caaqil, waxyeellada carqaladeynta suuxdinta iyo waligood khariidadaha beddelidda ka hor inta aysan kala bixin! Abaalmarin kasbasho!
Quusin oo maskaxdaada u kaxee muuqaallada 3D, sawirro midabbo badan leh iyo muusig dhalaalaya iyo cod adigoo adeegsanaya caqligaaga degdegga ah si aad u xalliso maansooyinka xiisaha leh ee weligood beddelaya ee leh saamaynta duurjoogta ah. Aad u fiican in la ciyaaro iyo in la daawado saaxiib guuldareysta ama guuleysto! Ciyaaraha ugu xiisaha badan 2021. Kani waa ciyaar bilaash ah oo laga heli karo dukaanka tufaaxa. Raac isku xirka tufaaxa dusha sare si aad u soo dejiso bilaash.
Fikradda Ciyaarta Degdega ah: Ka baxso shaybaarka miisaanka leh ee sayniska labiska ah. Xalliyaan wadiiqooyinka qalloocan, iska ilaali dabinnada, waxaadna soo ururisaa furayaasha ka hor inta aysan jahawareerka kala bixin. Heer kasta oo carqaladeeya ayaa ku sii kordha dhibaatada iyo isbeddela markasta oo aad ciyaarto Soo qaado tamarta sayidkiisa adoo uruurinaya: qadaadiic si aad u noqotid super orb, gems si aad u kasbato abaalmarin, iyo furayaasha dahabka si aad u furto qolalka gunnada. U fiirso meerayaasha iyo levers kuwaas oo badbaadin kara naftaada. Ku garaac heerarka sayidkii malaze si aad ugu guuleysato koob ay ka buuxaan qadaadiicyada Mazematize! Ku raaxayso 5 hababka ciyaarta: heerarka, arcade, furayaasha, fudud oo abuuri. Guud ahaan, xiisaha xiisaha leh retro arcade ee qaab ciyaareedka dhaqsaha badan ee ciyaarta oo caqabad ku noqon doonta maskaxdaada inta aad isku dayayso inaad baxsato
Tilmaanta Ciyaarta oo Buuxda: U adeegso caqligaaga si aad uga raadiso dariiqa aad uga baxdo miisaanka maskaxda ee shaybaarka leh waqtiyeynta adoo xallinaya waddooyinka leexashada, iyo ka baxsashada dabinnada iyo uruurinta furayaasha ka hor intaadan burburin. Ka dooro caqabadaada xulashooyinka 5-ta qaab ee ku qoran meenuga weyn: heerarka, arcade, abuur, furayaasha iyo fudeyd.